Kenyanka oo la soo sheegaayo in ay ka talaabsanaayan xadka u dhexeeya Kenya iyo Ugandha – The Voice of Northeastern Kenya
Kenyanka oo la soo sheegaayo in ay ka talaabsanaayan xadka u dhexeeya Kenya iyo Ugandha
Muwaadiniita u dhashay dalkan Kenya ayaa la sheegaya in ay ka talaabsanaayan xaduuda u dalkan la leeyahay waddanka Ugandha si ay u helaan adeegyada caafimaad.
Tan ayaa timid kadib markii ay dhaqaatiirta dalka ay shaqa joojin qaran ku dhaqaaqen iyagoo ka cabanaaya mushahaarkooda oo ay sheegen in u yahay mid aad u hoseeyo.
Dadka ku dhaqan qeybo kamid ah deegaanada Trans-Nzoia, West Pokot iyo Turkana ayaa la soo tabinaaya in ay ku sii qulqulaayan waddanka Ugandha waxana ay dawladda u direen baaq ah in ay xaaliso waxyaabaha ay tabanaayan hawlwadeenada caafimaad iyagoo sheegay in adeegyada caafimaadka ay yihiin kuwa aad u muhiim ah.
Shaqa joojinta qaran ee dhaqaatiirta ayaa waxa ay maanta gashay maalinta 6-aad iyadoo ay dawladda iyo masuuliyiinta dalada dhaqaatiirta dalka ay ku bahooben ee KNUN ay wax heshiis ah oo shaqa joojintaas lagu soo afjari karo ay gaari la yihiin.
Masuuliyiinta maamul goboleedyada Nakuru iyo Mandheera ayaa la sheegaya in ay sameeyen wax walibo oo karan kooda ah si ay u xaqiijiyan in ay shaqa joojintaas aysan wax saameyn ah ku yeelanin adeegyada caafimaad ee shacabka ku nool countiyadooda.
← Diyaaraha mareykanka oo Duqeyn ku dilay nin la sheegay in uu ka dambeeyay weerarkii Charlie Hebdo
Shacabka kuuriyada koonfureed oo soo dhaweeyay xilka xayuubinta madaxweynahooda →